Kaleidoscope: A Diff App maka Apple maka nchekwa, Koodu, na Ihe oyiyi | Martech Zone
Otu n'ime ndị ahịa anyị chọrọ nhazi ọhụrụ maka ihu akwụkwọ ụlọ ha chọrọ nnukwu mmepe na peeji nke isiokwu ahụ. Mgbe anyị nwere nnukwu ihe gbasara koodu ịza ajụjụ, anyị etinyebeghị akwụkwọ zuru ezu na faịlụ ọhụụ niile emelitere nke anyị mepụtara na anyị anaghị elele mgbanwe ọ bụla n'ime ebe nchekwa (ụfọdụ ndị ahịa achọghị ya). Mgbe eziokwu ahụ gasịrị, ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ ịlaghachi ma nyochaa folda na faịlụ ahụ, yabụ achọrọ m ịchọta azịza wee chọta ya - Kaleidoscope.
Site na Kaleidoscope, enwere m ike ịrụtụ aka na folda ọ bụla ma mata ozugbo faịlụ ndị agbakwunyere, wepụrụ, ma ọ bụ dị iche na ibe ha.
Enwere m ike imeghe faịlụ ọ bụla edezi ma hụ nhọta nke ngbanwe koodu ahụ mechara. Nke a bụ ihe atụ na faịlụ ederede doro anya:
Ọ bụrụ na nke ahụ ajụghị oyi, Kaleidoscope nwekwara ike mejupụta otu ntụnyere ahụ na onyonyo!
Mgbe ebudatara, m biliri ma na-agba ọsọ na ihe nke sekọnd - onye ọrụ interface bụ kensinammuo na mfe chepụta.
Budata ikpe ụbọchị 14 nke Kaleidoscope
Tags: apụlntụnyere kooduatụnyere ngwaichediff ngwafile tụnyerenchekwa foldafolda icheoyiyi tụnyereoyiyi diffiosOSX